I-Holland | Iimpawu zokugweba nokufa | Ulawulo lweSixhobo kunye nokuLungiswa
Ukuqinisekisa amanqindi eethebhulethi kunye nokufa kugcinwa zikwimeko elungileyo ukuvelisa iipilisi ezikumgangatho ophezulu kubalulekile kwimveliso yakho kunye nokuSebenza ngokuSebenzayo kwezixhobo (OEE). Oku kuyakukunika, abathengi bakho, abaphicothi zincwadi kunye nabalawuli uxolo lweengqondo ngokuqinisekisa ukuthotyelwa okupheleleyo kunye nokulandeleka.
Ngelishwa izixhobo zokucinezelwa kwethebhulethi zihlala zibonwa njengezinto ezinokusetyenziswa kwaye ukugcinwa kwazo kunokubonwa njengokungeyomfuneko kunye nokuchitha ixesha. Le ngcinga ebubuxoki enokuba nexabiso. Ukugcina izixhobo zakho zikwimeko elungileyo yokusebenza kunciphisa ixesha lokucinezela ithebhulethi kunye neengxaki zoxinzelelo. Uninzi lwenqindi kunye neengxaki zokufa zinokulandelwa ngokulandelelana ekuphatheni kakubi kunye neenkqubo zokugcina.
I-Holland icebisa ukulandela inkqubo elula yokuthathwa kwezixhobo ezisi-7 ukuze uncede abathengi bethu bafezekise ubomi babo kunye nokusebenza ngokusetyenziswa kwethebhulethi.
EPARMACARE I-7-STEP Projekti: Landa i PDF
I-Tool kufuneka icocwe kakuhle kwaye yomiswe ukuze isuse nayiphi na i-oyile okanye intsalela yemveliso.
Jonga ngokubonakalayo ukujonga izixhobo zomonakalo obonakalayo kwaye uqinisekise ukuba ulondolozo luyafuneka.
Ukukhanya komphezulu wokukhanya kunye nomonakalo ungacocwa kwaye ulungiswe ukwandisa ubomi besixhobo.
Kubaluleke kakhulu emva kokulungiswa kwaye kucetyiswa rhoqo. Ukuqinisekisa ukuba ubukhulu bokubekwa kwezixhobo kuhlala kunganyamezeleki.
I-05 - IsiPolish
Ukuqulunqa okusemgangathweni kuya kukhokelela kwisibuko esigqibeleleyo sokulungisa imiba yokucofa.
Ukuthambisa kubalulekile ukukhusela, ukugcina kunye nokunceda ukusebenza okucikizekileyo komshicileli wethebhulethi.
Iikhabhathi ezenzelwe ukugcinwa ngokukodwa mazisetyenziselwe ukwandisa ukhuseleko, ukhuseleko kunye nokunciphisa umonakalo onokubakho.
Uqeqesho kunye neNkxaso yezoBugcisa
Mna Holland ndikholelwa ekwabelaneni ngamava kunye nolwazi namaqabane ethu, ngenkqubo yoqeqesho kunye nemfundo kubandakanya iisemina, ii-webinars, indawo yokusebenzela kunye noqeqesho kwi-Intanethi. Siyakwazi ukubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokufunda kunye nenkxaso, nokuba ikwiziko lethu loqeqesho eNottingham, eNgilane okanye kwindawo ekumakhaya abathengi. Iingcali zethu zezixhobo zethebhulethi zinokunceda abathengi babone, baxilonge kwaye balungise uninzi lwezixhobo kunye nokusetyenziswa kwethebhulethi ngaphambi kokuba zibe yingxaki eya kuthi ichaphazele ngokungathandabuzekiyo ixesha lokuphumla kwethebhulethi kunye nokukhutshwa kwethebhulethi. Cofa apha ngezantsi ngolwazi oluthe kratya.
Ngaba ufuna ulwazi oluthe kratya malunga nokuLungiswa kwesiXhobo?
Gcwalisa le fomu ingezantsi:
Leliphi na inyathelo lesiXhobo seSondlo onomdla kulo?
bonke 1. Ucocekile 2. Vavanya 3. Ukulungiswa 4. Imilinganiselo 5. Polish 6. Lubricate 7. Ivenkile